यी हुन् दश शंख जसलाई घरमा स्थापना गर्नै पर्छ! हुनेछ धनको वर्षा साथै दुख दुर - JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
यी हुन् दश शंख जसलाई घरमा स्थापना गर्नै पर्छ! हुनेछ धनको वर्षा साथै दुख दुर
तपाईलाई सुनेर अचम्म लग्न सक्छ कि संसारमा ५० हजार भन्दा धेरै प्रकारका शंख पाइने गर्छ। त्यहि ५० हजार मध्यमा कुनै प्रकारको शंख तपाईको घरमा हुन सक्छ। ती शंख मध्य केहि दस शंखका बारेमा आज चर्चा गर्ने छौं। जुन धन प्राप्तको लागि शुभ शंख मानिने गर्छ।
८ नीलकंठ शंख: यस शंख धार्मिक ग्रन्थका अनुसार भगवान शिवले समुन्द्र मन्थनको क्रममा निक्लेको विष शेवन गर्ने क्रममा नीलकंठ शंख माथि राखेर विष शेवन गरेको थिए। यस शंख घरमा स्थापना गर्दा विषालु जनावरले दुख नदिने विश्वास गरिन्छ। यस शंखमा गाईको दुख राखेर पिउने गर्नाले स्वास्थ्य राम्रो हुने विश्वास गरिने गरिन्छ।
१० लक्ष्मी शंख: तपाईलाई सुनेर अचम्म लग्न सक्छ कि संसारम ५० हजार भन्दा धेरै प्रकारका शंख पाइने गर्छ। त्यहि ५० हजार मध्यमा कुनै प्रकारको शंख तपाईको घरमा हुन सक्छ। ति शंख मध्य केहि दस शंखक बारेमा आज चर्चा गर्ने छौं। जुन धन प्राप्तको लागि शुभ शंख मानिने गर्छ।